Rosia: Mahazo Alàlana Hitifitra Vehivavy Ny Polisy Raha Tsy Hoe Mitondra Vohoka Angaha Iry Voalohany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2015 8:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, čeština , English
“Raha tsy misy endrika hita maso hoe mitondra vohoka” dia tokony hanome alàlana ny polisy hahazo hitifitra vehivavy ilay fanitsiana. Sary nafangaron'i Tetyana Lokot.
Vondrona iray ahitàna mpanao lalàna ao amin'ny Domà -mpanjakana ao Rosia no nanoso-kevitra amin'ny fanitàrana ny fahafahan'ny polisy misitraka ny tsimatimanota amin'ny fampiasàna fitaovam-piadiana, tamin'ny fanolorany fanitsiana ny lalàna iray mandràra ny manampahefana ao amin'ny polisy tsy hitifitra andian'olona na vehivavy.
Andiam-panitsiana an'ilay lalàna momba ny polisy natsofoka ho ao amin'ny mpanao lalàn'ny parlemanta Rosiana,avy amin'i Irina Yarovaya, solombavambahoaka avy amin'ny antoko Rosia Mitambatra sady mpitarika ny kaomisionan'ny fandriampahalemana ao amin'ny parlemanta no manoso-kevitra amin'ny hanomezana ireo manampahefan'ny polisy “ny mety ho fanànan'izy ireo ny marina sy fanohanana azy,” midika hoe tsy hiatrika fanenjehana noho izay rehetra nataony nandritra ny andraikitra ofisialy nataony ry zareo, indrindra fa raha noho ny lazaina fa hetsika manan antony mazava ary mifanaraka amin'ny lalàna misy.
Araka ny lalàna misy amin'izao fotoana, voaràra tsy mahazo mitifitra vehivavy ny polisy. Mety hanafoana io fitsipika ankapobeny io ireo volavolam-panitsiana : amin'ny vehivavy izay “ahitàna marika hita maso fa mitondra vohoka” ihany no mety tsy hihatra ilay fandraràna tsy hitifitra. Mety hanome alàlana ny polisy ihany koa ilay lalàna vaovao, hfahany mitifitra andiam-bahoaka (izay voaràra amin'izao fotoana izao), amin'ny filazàna fa nataony izany mba ” hisakanana fihetsika fampihorohoroana na toe-draharaha mety hakàna takalon'aina.” Heverin'ny hafa aza hatramin'ny fanomezana zo ireo polisy hanao fisavana toeram-ponenan'olon-tsotra sy ny isam-batan'olona, miainga avy amin'ny “ahiahy azony saininy” fa tsy voatery hanomezana porofo mivaingana, ary miditra an-tranon'olona mba hisambotra, na dia tsy mbola nisy vesatra iampangàna azy ireo na filazàna azy tamin'ny fomba ofisialy ho noahiahiana ho mpanao heloka bevava.
Raha raisina ireo tantaranà herisetran'ny polisy ary fanararaotana mpifonja ao Rosia, ny sasany amin'ireo fanehoankevitra ao amin'ny RuNet momba ilay lalàna no efa somary nampoizina ihany, miaraka amin'ireo mpampiasa azy mitaraina noho ny fitaran'ny fahefàna sy ny tsimatimanota ananan'ny polisy.
Ny olona rehetra salama saina dia samy mahatakatra fa matahotra ny vahoakany ny manampahefana, mihoatra lavitra noho ireo fahavalony ara-tantara avy any Andrefana.
Ny hafa mihanihany hoe mety manana tanjona tsy sahiny ambara, indrindra fa manoloana ny vehivavy, ireo mpanao lalàna nandroso ireo fanitsiana ireo.
Tsy fantratrareo ve, fomba iray maranitra ho entina miady amin'ny olan'ny fitomboan'ny mponina io. Raha voadonna ianao, tsy manana atahorana intsony.
Toa niteraka tabataba faran'izay goavana ilay sosokevitra hanovàna ny fenitra amin'ny fitifirana vehivavy. Nadya Tolokonnikova avy amin'ny Pussy Riot, izay nanomboka ny MediaZona tamin'ny taona lasa, vavahadin-tserasera vaovao natokana hitaterana ireo olana sy tranga any anaty fonja Rosiana any, dia nibitsika momba ny hatezerany.
Homena alàlana araka ny lalàna ho afaka mitifitra vehivavy ny polisy. “Tsy voatazon'ny tànana intsony ireto zana-borona,” hoy ny Domà-mpanjakana nanapaka hevitra.
Na izany aza, avy hatrany dia nanontany ireo sasany mpampiasa Twitter momba ny hatezeran'i Tolokonnikova, mifikitra amin'ny sary maha-mpiaro ny vehivavy azy.
Nadya, mpiaro ny vehivavy ianao, sa tsy izany? Eo anatrehan'ny lalàna dia tokony hitovy amin'ny lehilahy ny vehivavy.
Ampahany iray hafa amin'ny media sosialy no miady hevitra manodidina ny “fiheverena ho manana ny marina” omena ny polisy Rosiana, miodinkodina eo amin'ny fampitahàna ny lalàna toy io saingy any amin'ny firenena hafa. Misy ireo manao fampitahànaamin'ny any Etazonia, toerana izay iatrehan'ny herin'ny polisy ny fanarahamaso akaiky ataon'ny vahoaka manoloana ireo hetsika fanoheranany herisetra nataon'ny polisy toy ny tany Ferguson sy Baltimore.
Any Etazonia, efa elaela ihany no nanana zo maromaro ny polisy.
Efa somary nohakaikezintsika ny lalàna sy ny zo ananan'ny polisy ao Etazonia. Any ry zareo afaka mitifitra noho ny “antony azo leferina”.
Miasa ny politikan'ny vaky varavarankely.
Raha toa ireo fanitsiana natolotra ka hanafaka/hanadio ny parlemanta, dia toa tsy faly velively amin'ilay hevitra kosa ny Rosiana, hoe homena fahefana bebe kokoa sy andraikitra zara raha misy ireo mpampihatra lalàna ao amin'ny firenena.